Xilkii uu iska casilay Boris Johnson oo loo magacaabay Jeremy Hunt… – Hagaag.com
20 Febraayo 2019 in English // Putin warns new missiles could target ‘decision-making centres’…
20 Febraayo 2019 in English // PM Dr Abiy holds talks with President of Somaliland Administration…
20 Febraayo 2019 in National // M/weynaha maamulka Somaliland iyo wefdigiisa oo gaaray magaalada Addis Ababa…
20 Febraayo 2019 in English // Three MPs abandon May over Brexit as UK political sands shift…
20 Febraayo 2019 in National // M/weynayaasha Somalia iyo Jabuuti oo si qoto dheer uga wada hadlay xiriirka walaaltinimo…
Xilkii uu iska casilay Boris Johnson oo loo magacaabay Jeremy Hunt…
Posted on 10 Luulyo 2018 by Admin in World // 0 Comments
Xoghayaha caafimmaadka ee dalka Britain, Jeremy Hunt ayaa loo magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee Britain, kadib markii uu xilkaasi iska casilay Boris Johnson.
Ra’iisul wasaaraha Britain, Theresa May ayaa la kulantay cadaadis xoogan oo kaga imaanayay xisbigeeda, taasi oo ku saabsaaneyd qorshaha ay ku wajaheyso ka bixida Midowga Yurub.
Magacaabida wasiirka cusub ayaa timid, kadib markii Boris Johnson uu sheegay in uusan la dhacsaneyn qaabka Theresa May ay u wajaheyso ka bixida midowoga Yurub, waxaana uu noqonayaa mas’uulkii labaad ee iscasila muddo afar iyo labaatan saac.
Waxaa horay isu iscasilay Mr David Davis oo Britain u qaabilsanaa wadaxaajoodka ka bixitaanka Midowga Yurub oo xilkan loo magacaabay sanaddii 2016.
Arrintan ayaa carqalada horleh ku noqoneysa qorshaha Britain ay uga baxeyso Midowga Yurub, iyada oo ay sagaal bilood oo keliya ay ka hadhay xilligii loo asteeyay in Britain ay ka baxdo Midowga Yurub.
Waxaa sdioo kale soo baxaya warar sheegaya in siyaasiyiinta qaar ee iscasilay ay u hanqal taagayaan xilka Ra’iisal wasaarinmada, inkastoo Ra’iisul wasaare Theresa May oo ka hadleysay aqalka baarlamanka ay beenisay wararkaasi.
Theresa May ayaa waxaa kale oo ay sheegtay in aysan habooneyn in xildhibaanada xisbigeeda ay ku kala qeybsamaan ka bixida Midowga Yurub, iyadoo na ka digtay in awooda uu la wareego hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha, Jeremy Corbyn.
About Admin (5945 Articles)
Putin warns new missiles could target ‘decision-making centres’…
PM Dr Abiy holds talks with President of Somaliland Administration…
Three MPs abandon May over Brexit as UK political sands shift…
Gaari xambaarsana lacag 3.4 milyun euro oo la baxsaday wadihii gaariga dalka Faransiiska…
Salman Rushdie oo dil ugu xukunnaa Iran oo sheegay inuu nolol caadi ah ku nool yahay…